Huawei Y210-0010 ရဲ့ Build Number B829 firmware ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Android Software » Huawei Y210-0010 ရဲ့ Build Number B829 firmware
Huawei Y210-0010 ရဲ့ Build Number B829 firmware
Tuesday, November 05, 2013 Android Software
Huawei Y210-0010 ရဲ့ Build Number B829 နဲ့ဆုံးတဲ့ Y210-0010 firmware (U8685D Android 2.3 V100R001C17B829_ China Unicom) Official Firmware ကိုဒေါင်းလို့ရပါပြီ.. ခုနောက်ပိုင်း Root ဖောက်တာ အဆင်မပြေလို့ Firmware ပြန်တင်ချင်ရင် အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ..
ဒီ Firmware ကို ဒေါင်းပြီး ရလာတဲ့ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ dload ဖိုင်ရလာပါမယ် dload ဖိုင်ကို ဘာမှမရှိတဲ့ SD ကဒ်ထဲကို ထည့်ပါ SDကဒ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ရှိရင် အကုန်ဖျက်လိုက် ပါ ၊ dload ဖိုင် SD ကဒ်ထဲကို ထည့်ပြီးရင် SD ကဒ်ကို ဖုန်းထဲထည့်ပါ ၊ vol up + vol down + power သုံးခုလုံးကို တွဲနှိပ်ပါ သူဘာသာ firmware ရေးသွားပါလိမ့်မယ်၊
Root ဖောက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်ကတော့ Vroot ဒါမှမဟုတ် Eroot နဲ့ ဖောက်လိုက်တယ်.. Wifi Error မတက်ဘူး.. VRoot ကတော့ App တွေ Install လုပ်တဲ့အခါ Superuser Request တောင်းတယ်ခင်ဗျ.. Eroot ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်.. လိုချင်တဲ့ သူတွေအောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..
Auto Missed Call.apk
ဖုန်းလာရင် ခလုတ်မနှိပ် လှုပ်ပြီး ဖုန်းပြေားလို့ရတဲ့...
Huawei Y210C Root အလွယ်ကူဆုံး လုပ်နည်း
STARDOCK DECOR 8 V.1.0 FINAL
SMART APP PROTECTOR 3.8.0 APK ANDROID
Android ဖုန်းတွေ ဘာကြောင့် အသုံးပြုရတာ လေးနေပါသလဲ
Android Setting ပိုင်းလေ့လာခြင်း
Arsenal them လေးပါ
Huawei G610-u00 firmware လေးပါ
WINDOWS 8 GADE
Window -7 Manager
Android ဖုန်းလေးပေါ်မှာ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်
DEEP SAVER BATREY SAVER PRO 1.31 APK
Simple Unrar V2.1 For Android
Start Menu X Pro 4.97 ML
iSkysoft Video Converter Ultimate 4.6.0.0 + inam
PGWARE GameGain3(2013) Full Version
Windows 8 Manager 1.1.5 Full Version
DriverPack Solution 13 Full Version (2013)
ဂိမ်းတွေ ဆော့ဝဲတွေ ဒေါင်းလုပ်ရှာဆွဲမယ်
Missed Call Alarm ပေးတဲ့ဆော့ဝဲ
Android Application သုံး ဖုန်းတွေအတွက် ကားသူခိုး (...
BackStab ဆိုတဲ့ ဂိမ်း
Android နည်းပညာအပိုင်းအစ (၂)
iPhone 5S Lock ဆော့ဝဲ
အစွမ်းထက်တဲ့ VRoot 1.7.3.4388 ထွက်ပြီ.
Real steel world robot boxing (300MB) For Apk
Vitro Full Glass theme for Windows 7
သိပ်မိုက်တဲ့ Software ကိုယ်ကသ်ီချင်းဆိုရင်နောက်ကလု...
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ဒဇိုင်းလှတဲ့ ဘလော့အမြန်ပြုလုပ်ရန်
သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းလေးကို အလန်းလေးကလိကြမယ် (၂)
Android File Data Error တွေကိုရှင်းဖျတ်ထုတ်နည်းပါ
Seep Test ကို သုံးပြီ မိမိစက်ဟာ ဘယ်လောက်ထိ လိုင်းဆ...
Myanmar Blogger များ၏ နည်းပညာ အခက်အခဲများကို အခမဲ့...
အွန်လိုင်းကနေ movie (or) mvsic (or) files တွေကို s...
PC Background ပြောင်းဆော့ဝဲ
GSM Message ကို Free ပို့လို့ရပါပြီ
Android သုံးရတာမြန်ဆန်စေဖို့ Quick CPU Overclock P...
မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းကနေ message ပို.လို. ရပီဆိုပဲ
JAS 5s (မြန်မာဖုန်း) ထွက်ရှိ
Windows 8 သမားတွေရော Programming လေ့လာနေသူတွေရောဖတ...
Android မှာ Facebook ကို PC ပုံစံမျိုးသုံးနိုင်မယ်...
God of War-2 (PC Game)
Root Master 1.3.6 apk
မြန်မာ့ မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှုမ...
Pro Myanmar Root.apk
IMEI ပြန်ရေးလို့ရမယ့် IMEI_SN_Writer_V1.1
Flash မီးလေးကို လော့ချဆော့ဝဲလေးပါ
ဒါလေးက ကိုယ်စက်ကို ပိတ်စေလိုတဲ့အချိန်၊ ပြန်ပွင့်လိ...
မီးတောက်တွေနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်ပျံနေတဲ့ ဒီဇိုင်းလေး လုပ...
CDMA 800 MHz ဖုန်းပေါ်မှ ဟန်းဆက်ပေါ်မှ တိုက်ရိုက် အင...
Huawei Handset C8500, C8600 များတွင် ထည့်သွင်းနိုင...
SetCPU (Root Users) v3.0.5
Android ဖုန်းများအတွက် အလွယ်ကူဆုံး root လုပ်နည်း
C8650, C8800, S8600, U8800 ကို Root မရတဲ့သူတွေ
Firefox 25.0 Beta9(PC + Offline INSTALLER + နောက...
mmCalculator v.1.1 APK (မြန်မာ့ ဂဏန်းတွက်စက်)
ဖုန်းတွေမှာ သုံးတဲ့ Tango လေးကို Window PC မှာသုံး...
APK Install လုပ်ပြီး Root လုပ်လို့ရတဲ့ RootTool အသ...
Galaxy Note3ကို Official 4.3 + ROOT + မြန်မာဖောင...
Internet Connection ကဘာဖြစ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင...
Sniper2Ghost Warrior [Full PC Game]